CODDAYN: Jamaahiirta Arsenal Oo Cod Ku Saadaaliyay Haddii Ay Kooxdoodu Usoo Bixi Doonto Champions League Xilli Ciyaareedka Dambe - Miyay Wali Niyad Wacan Yihiin? - Gool24.Net
Il wareedka ree England ee Sky Sports ayaa jamaahiirta kooxda Arsenal ka qaaday coddayn uu ku ogaanayo tirada ay leeg yihiin kuwooda aaminsan inay afarta kaalmood ee sarre xilli ciyaareedkan ku dhammaysan karaan iyo inta kale.
Gunners ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dhibaato soo marayay iyadoo ay ku adkaatay inay guulo gaadhaan kulamada horyaalka iyo kulamadoodii ugu dambeeyay ee Carabao Cup iyo Europe League.
Kaddib natiijo xumada soo wajahday Gunners, Tababare Unai Emery ayuu cadaadis ku saaran yahay xilkiisa shaqo walow wali la aaminsan yahay inuu haysto kalsoonida boodhka kooxda haddana waxa suurogal ah in deg deg loo caydhiyo.
Jose Mourinho oo ay mudo dheer soo xifaaltameen Arsenal ayaa kamida tababarayaasha lala xidhiidhinayo si lamid ah tababarayaasha shaqo la’aanta ah ee Luis Enrique iyo Maxi Allegri iyo waliba Mikel Arteta oo hore ugu soo ciyaaray.
Si kastaba, Codkan lagu qaaday Sky Sports ayaa si weyn u caddeeyay in jamaahiirtu aysan wax niyad samaan ah ku qabin kooxdooda iyo siday haatan ku socoto.
7% (Boqolkiiba toddoba) kaliya ayaa aaminsan in Arsenal ay ku dhammaysan doonto afarta kaalmood ee ugu sarreeya horyaalka halka 93% kale ay u arkaan safkooda iyo Unai Emery kuwo aan awoodaas lahayn.
Haddiiba ay dhacdo aragtida jamaahiirta badan ee ah inay afarta kaalmood ee sarre seegi doonaan ayay noqon doontaa xilli ciyaareedkii afraad ee xidhiidh ah ee ay Arsenal ka hadhi doonto tartankaas.